असफल विवाहको परिणाम श्रीमतीको हत्यापछि आत्महत्या - अपराध - साप्ताहिक
असफल विवाहको परिणाम श्रीमतीको हत्यापछि आत्महत्या
भाद्र १४, २०७३
भनिन्छ, माया–प्रेमलाई उमेरले छेक्छ, न जातले, न रूपले, न भौगोलिक दूरीले । मन मिलेपछि प्रेममा सबै कुरा सम्भव हुन्छ तर जवानीमा अन्य कुरामा ध्यान नदिई गाँसिएका सम्बन्ध लामो समय टिक्न नसकेका कैयौं उदाहरण हाम्रा सामु छन् । यसरी नै गरिएको एउटा निर्णयलाई परिवर्तन गर्न खोज्दा पोखरामा एउटा ठूलो घटना घटेको छ । घटनाका प्रमुख पात्र अन्तरजातीय विवाह गरेका सञ्जीवबहादुर नेपाली र उनकी श्रीमति सोनम रेग्मी हुन् ।
सञ्जीवबहादुर नेपालीका आफन्तहरूको भनाइ तथा उनले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका सामग्री हेर्दा उनी सोनम रेग्मीलाई औधी माया गर्थे । उनीहरूको अन्तरजातीय विवाहलाई रेग्मी पक्षले स्वीकार गर्न नसके पनि नेपालीको परिवारले स्वीकार गरेको थियो, तर अन्तिम अवस्थामा सोनम रेग्मीले सम्बन्धमा फुलस्टप लगाउन खोजेपछि नेपाली तनावमा आए । उनले आफ्नो सम्बन्ध अघि बढाउने प्रयास गरे पनि अन्तिम अवस्थामा अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता भएपछि यो घटना घटेको देखिन्छ ।
कसरी भयो मृत्यु
सोनम रेग्मी पोखरा–८ चालिसेमार्गस्थित दामोदर चालिसेको घरमा विगत चार महिनादेखि डेरा गरी बस्दै आएकी थिइन् । बुधबार अपरान्ह ५ बजे उक्त डेरामा पुगेर सञ्जीवबहादुर नेपालीले सोनममाथि अन्धाधुन्ध चक्कु प्रहार गरे । नेपालीले रेग्मीलाई कोठाबाहिर निकालेर घाँटी र पेटमा चक्कु प्रहार गर्दै आँगनमा हत्या गरेको बताइन्छ । रेग्मीको हत्यापश्चात् सञ्जीवले घटनास्थलमै विष सेवन गरेका थिए र उनी श्रीमती सोनमसँगै लडेको अवस्थामा भेटिए ।
घटनास्थलमा फेला परेको नीलो ब्यागमा सुसाइड नोटसमेतका डकुमेन्ट थिए । वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका इन्स्पेक्टर मोहनमणि अधिकारी सञ्जीव मार्ने र मर्ने नियतले आएको देखिएको बताउँछन् । विष सेवन गरेका सञ्जीवको प्राण गैनसकेकाले गण्डकी मेडिकल कलेज, नयाँबजार पुर्‍याइए पनि साँझ ६:१० मा उनको पनि ज्यान गयो । सञ्जीवले लेखेको सुसाइड नोटमा सोनमलाई सम्बोधन गरी सम्बन्ध राम्रो नभएको र अब दुवै नरहने कुरा उल्लेख गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । मृतक दुवैको शव पोस्टमार्टमपश्चात् आफन्तलाई बुझाइएको छ । घटनासम्बन्धी थप अनुसन्धान भैरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता डीएसपी गजुसिद्धी बज्राचार्यले बताए ।
सिजेन नेपालीको नाममा फेसबुक
सञ्जीव बहादुर नेपालीले सिजेन नेपालीको नाममा फेसबुक एकाउन्ट खोलेका थिए । फेसबुकमा पोस्ट गरिएका सामग्री हेर्दा उनी सोनमलाई प्रगाढ प्रेम गर्थे भन्ने देखिन्छ । घटना घट्नुभन्दा अघिल्लो दिनको पोस्टमा उनले ‘आज किन–किन भगवान्मा आशा राख्न मन लाग्छ सो हेरम्’ लेखेर पोस्ट गरेका छन् ।
यसैगरी १० अगस्टमा ‘रहर थियो अरूजस्तै हाँस्न अनि रमाउन ? प्रे फर गड मिस यू’ भनिएको छ । सञ्जीवले २५ जुलाईमा आफू र श्रीमती सोनमको तस्बिर पोस्ट गरेका छन् । यद्यपि परिवारले दिएको जानकारीअनुसार उक्त समयमा उनी दुबईमा थिए । १९ जुलाईमा उनले ‘आशा अझै मरेको छैन जित्छु एक दिन हारेको छैन’ भन्दै आफनो तस्बिर पोस्ट गरेका छन् । जुलाई १८ मा ‘सुल्तान हेरेपछिको इमोसन’ भन्दै फोटो पोस्ट गरेका छन् ।
१६ जुलाईमा ‘लाग्दैछु अझै पनि तिम्रो पछि रोकिएका छैनन् यी मेरा पाइलाहरू’ भनेका छन् । ‘एउटै सहारा तिम्रो मायाको’ भन्दै ५ जुलाईमा उनले आफ्नो अर्को फोटो पोस्ट गरेका छन् । सञ्जीवले आफ्नो घाँटीमा समेत सोनमको नाम खोपाएका थिए । २७ मेमा उनले ‘मलाई संसारमा सबैले भन्दा बढी माया गर्ने मान्छे भन्दै’ सोनमको फोटो पोस्ट गरेका छन् ।
जुन ५ मा ‘बिर्सन खोज्दैछु तिमीलाई मान्दैन यो मन, भुलिदिन खोज्दैछु तिमीलाई याद आउँछ झन्–झन्, ह्दयदेखि माया गरे त्यो मेरो भूल रहेछ, तिमीलाई चिन्न नसक्ने मेरै दिल कमजोर रहेछ’ भन्दै एउटा अर्को पोस्ट गरेका छन् । यसरी उनका हरेक पोस्टमा श्रीमती सोनमप्रति अथाह प्रेम दर्साइएको पाइन्छ ।
यता सोनम रेग्मीको नाममा रहेको फेसबुक एकाउन्टमा ‘आई लभ यू सिजेन’ लेखेर आफ्नो फोटो प्रोफाइल तस्बिरका रूपमा पोस्ट गरेको देखिन्छ । यो फेसबुक एकाउन्ट हेर्दा यो एकाउन्ट पनि सञ्जीवबहादुर नेपालीले नै चलाएका थिए कि भन्ने लाग्छ । दुवै फेसबुक एकाउन्टका तस्बिर एकै प्रकृतिका देखिन्छन् । सोनमको नाममा रहेको फेसबुक एकाउन्टमा कभर फोटो सिजनको छ । त्यहाँ सिजनका एकल तस्बिरसमेत पोस्ट भएको पाइन्छ । यो एकाउन्टमा मे १८ मा ‘आई लभ यू बुढो’ भन्दै दुवै जनाको संयुक्त तस्बिर राखिएको छ ।
के भन्छन् आफन्त ?
घटना घट्नुभन्दा एक दिनअघि आफूले दुबईबाट फोन गरी भाइ सञ्जीवसँग कुराकानी गरेको दिदी शान्ता परियार बताउँछिन् । फोनमा उनले भाइलाई पनि विदेशमा लाने भन्दै परिवारलाई नआत्तिन आग्रह गरेकी थिइन् । अन्य सबै कागजात घनास्थलमा भेटिए पनि सञ्जीवबहादुरको पासपोर्ट र टिकट नभेटिएकाले घटना रहस्यमय भएको नेपालीका आफन्तहरू बताउँछन् ।
नेपाली ०७२ वैशाखमा विदेश गएका थिए । त्यसपश्चात् सञ्जीव माघमा नेपाल आएर फागुनमा पुन: विदेश गए । वैशाखमा श्रीमती सोनम रेग्मीलाई समेत विदेश लाने भन्दै उनी नेपाल आए । एक साताको बिदामा आएका सञ्जीवले सोनमलाई फेला पार्न सकेनन् । थप १५ दिन नेपाल बसी उनी दुबई फर्किए । आफ्नी श्रीमती फेला नपरेपछि नेपालीले उनी हराएको निवेदन प्रहरीमा दर्ता गराएको आफन्तहरू बताउँछन् ।
नेपालीका आफन्तले बताएअनुसार वि.सं.२०६७ फागुनमा उनीहरूको विवाह भएको थियो तर सोनमले वि.सं.२०७३ साल वैशाख ६ गते कास्की जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्दा वि.सं.२०६९ वैशाख ४ गते भागी विवाह गरेको कुरा उल्लेख गरेकी छिन् । उनले आफूले कमाइ गरी बचाएको रकम र थप रकम आमासँग मागेर सञ्जीवबहादुरलाई विदेश पठाएको जनाएकी छिन् । यसरी हेर्दा सोनम रेग्मीको माइतीसँगको सम्बन्ध सुध्रँदै गएको देखिन्छ ।
उनले केही समयपछि नै श्रीमान् सञ्जीव विदेशबाट फर्किएर आएर आफूलाई गालीगलौज तथा कुटपिट गर्ने गरेको भन्दै अंश हकसमेत छाडी सम्बन्धविच्छेद गरी पाउँm भनी मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । माया प्रेम गर्ने यो जोडी रेग्मी परिवारकै कारण छुट्टिएको नेपालीका आफन्तहरूको गुनासो छ । नेपालीलाई मानसिक यातना मात्र नभएर ज्यान मार्ने धम्कीसमेत दिइएको उनीहरूको दाबी छ । जातीय विभेदका कारण यस्तो घटना भएको नेपालीकी दिदी शान्ता परियारले बताइन् ।
को हुन् सोनम केसी
सोनम रेग्मीको जन्म वि.सं. २०५१ माघ ३ गते पौवेगौडे–२ स्याङ्जामा भएको हो । बुबा नरेशप्रसाद रेग्मी तथा आमा सरस्वती रेग्मीको पहिलो सन्तानका रूपमा उनको जन्म भएको थियो । सोनमका एक भाइ छन् । उनका बुबा इन्डियन आर्मीका पेन्सनर हुन् ।
प्रगतिनगरमा घर किनेर आफ्ना सन्तानलाई पढाउन बस्ने क्रममा छोरीले परिवारको इच्छाविपरीत भागेर विवाह गरेपछि निराश भएका रेग्मी दम्पती प्रगतिनगरबाट पोखरा बसाइँ सरेका थिए । भागेर विवाह गरेको केही वर्षसम्म माइतीसँग सोनमको सम्बन्ध टुटेको भए पनि पछिल्लो समयमा सम्बन्धमा सुधार आएको थियो । श्रीमान्सँग सम्बन्धविच्छेद गर्न
चाहेकी रेग्मीको पछिल्लो व्यवहारका कारणले श्रीमान्कै हातबाट हत्या भयो । सोनम स्याङ्जामा रहँदा कालिका बोर्डिङ स्कुल सेतीदोभानमा तथा पोखरा आएपश्चात् स्पाइरल एकेडेमीमा शिक्षिकाका रूपमा काम गर्दै दैनिक गुजारा चलाउँथिन् । सञ्जीव भने बेरोजगार थिए ।
को हुन् सञ्जीव बहादुर
सञ्जीवबहादुर नेपालीको जन्म वि.सं. २०५१ पुस ८ गते स्याङ्जा जिल्लाको किचनास गाउँविकास–३ मा भएको हो । बुबा रेस्मे नेपाली तथा आमा सरस्वती नेपालीको तेस्रो सन्तान सञ्जीव अध्ययनको सिलसिलामा किचनासबाट प्रगतिनगर झरेका थिए ।
ज्योति उच्च माविमा ११ कक्षामा पढ्ने क्रममा उनको भेट सोनमसँग भएको थियो । त्यतिबेला सोनम १२ कक्षा अध्ययन गर्थिन् । उनीहरूको प्रेम यतिसम्म झाँगियो कि दुवैले अन्य सबै कुरालाई तिलाञ्जली दिँदै भागी विवाह गरे तर समयक्रमसँगै सोनमले सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गरेपछि निराश भएका सञ्जीवले सोनमको हत्या मात्र गरेनन् आफूले समेत विष सेवन गरेर आत्महत्या गरे ।
पोस्टमार्टमपश्चात् छोरा–बुहारीको शवलाई ६७ वर्षका वृद्ध बाबु रेस्मे नेपालीले बुझेका थिए ।
प्रकाशित :भाद्र १४, २०७३
आत्महत्या : बहादुरी कि कायरता ?
विवाहको केही वर्षपछि किन दम्पतीबीचको सम्बन्ध उस्तै रहँदैन ?
युरो–२०१६ का असफल स्टार
प्रेम अस्वीकार हुँदा आत्महत्या
अपराध संसारका बादशाह असार ३०, २०७६
आर्थिक अपराधको संस्थागत जालो असार २३, २०७६